आजदेखि सुर्खेतमा पनि कोरोना भाइरस परीक्षण
सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने मेसिन र विशेषज्ञ पठाएसँगै आजदेखि सुर्खेतमा यसको परीक्षण सुरु भएको छ । वीरेन्द्रनगर कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पतालमा स्थापना गरिएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले कर्णालीका सबै जिल्लाबाट कोरोना आशंकित बिरामीको नमुना संकलन गरी यहाँबाटै परीक्षण गरिने बताए । “मेसिन जडान, प्रयोगशाला स्थापनालगायतका सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौँ, आजदेखि थ्रोट स्वाबको परीक्षण सुरु हुँदै छ”, उनले भने, “प्रयोगशालामा खटिने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने काम पनि भइरहेको छ ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्णालीका लागि कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने आरटीपिसीआर मेसिनसँगै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत डा. रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विशेषज्ञका रुपमा खटाएको छ । विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठले एक साता सुर्खेतमै रहेर चिकित्सक तथा ल्याब कर्मचारीलाई आवश्यक परामर्श दिनेछन् । उनले एक दिनमा १० जतिको परीक्षण गर्न सकिने र एक घण्टाको अवधिमा एउटा नमुनाको नतिजा बाहिर आउने बताए ।
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्णालीमा एक हजार किट पठाइसकेको छ । यसअघि कोरोना परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरी काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सुर्खेतमै कोरोनाको परीक्षण हुने भएपछि रिर्पोट छिटो आउने अपेक्षा गरिएको छ । -रासस
काठमाडौं । साढे १३ महिना वितिसक्दा पनि नभएको नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरुको सरुवा अझै एक सातासम्म रोकिनसक्ने सम्भावना छ । यसअघि... १८ मिनेट पहिले